အကောင်းဆုံးကို Wi-Fi ကို Speakers ခြောက် - သတင်း Rule
အကောင်းဆုံးကို Wi-Fi ကို Speakers ခြောက်
သူတို့ကဂီတကိုနားထောငျဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတဆင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် - သို့မဟုတ်မှာသိမ်းထားတဲ့ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းများ. ဒါပေမယ့်အရာစပီကာကိုအသုံးပြုရန်အလွယ်ကူဆုံးများမှာ, နှင့်အကောင်းဆုံးအသံအရည်အသွေးကိုပူဇော်ရာ? ကျနော်တို့ကစမ်းသပ်ခြောက်ထား
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အကောင်းဆုံးကို Wi-Fi ကိုအသုံးပြုခြောက်” မှ Ian Tucker ကရေးသားခဲ့သည်, တနင်္ဂနွေ 1st မေလပေါ်တွင် Observer များအတွက် 2016 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
£ 499; ငါး amp ယာဉ်မောင်း, 250ဒဗလျူစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု; AirPlay, Spotify, ဘလူးတုသ်
လျင်မြန်စွာစတင်: app ကို Download လုပ်, အနည်းငယ်ကိုပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းများနှင့်သင်တို့အထဲ၌နေ. တစ်မိနစ်ခန့် (ကနဦး Set-up).
ပုံစံ: သာယာသော lozenge အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုသင့် sideboard အပေါ်ကောင်းသောကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်နှင့်အကွာအဝေးအတွင်းအခြား boxier ပီ chunky bookends စေမည်. တစ်ဦးတည်းသာကေဘယ်လ်ကြိုးလိုအပ်ပါတယ်, ထိုယူနစ်အနည်းငယ်မသိမသာနေရာချခလုတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ဘယ်တော့မှ. စမျးသပျအယူနစ်၏အကောင်းဆုံး app ကို, အဓိကအားဖြင့်ကွောငျ့, (ဘေးဖယ်စက္ကန့်အနည်းငယ်မှတက် setting အခါ,) သငျသညျကိုအသုံးပြုစရာမလို.
အသံ: သဘာဝအသံအသံ, ဒါပေမယ့်သီချင်းတွေကို underpowered ခံစားနိုင်ပါတယ်. တကယ်ဘဝရန်သင့်စုဆောင်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲသစ္စာရှိသောအလုပ်မ. ပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းငယ်ကြက်သီးထဖို့အာမခံချက်သီချင်းများ, ထိုကဲ့သို့သောဂျိမ်းစ်တေလာရဲ့မီးသတ်နှင့်မိုးအဖြစ်, အနည်းငယ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမြည်နိုင်. သို့သော်, Justin Timberlake ကဤစပီကာအပေါ်တကယ်ကောင်းသောအသံ.
ဆုံးဖြတ်ချက်: သာလွန် software နှင့်ဒီဇိုင်းကို multi-အခန်းစနစ်၏အချက်အချာအဖြစ်ဤအ Sonos ရန်အလေးအနက်ပြိုင်ဘက်လုပ်. သငျသညျဝယ်ခင်နှစ်ဦးစလုံးကိုနားထောငျကြိုးစားပါ.
20ရာစုသံကို: Raumfeld ရဲ့စတီရီယို Cube. ဓါတ်ပုံ: အ Observer ဘို့ကက်သရင်းအန်းနှင်းဆီ
Raumfeld စတီရီယို Cube
£ 369; လေး drivers တွေကို 160W; ဒီရေ, Spotify, Napster
လျင်မြန်စွာစတင်: ဒေါင်းလုပ် app ကို, ထိုယူနစ်အပေါ်တစ်ဦး button ကိုနှိပ်, input ကိုသင့် Wi-Fi ကိုစကားဝှက်ကို, app ကိုပတ်ပတ်လည် fumble နှင့်ရွေးချယ်မှုသင့်ရဲ့ streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုတက် join (Apple ကဂီတထောက်ခံသည်မဟုတ်ပေမယ့်). နီးပါးငါးမိနစ်.
Related: Kanye West ရမှတ်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ဘယ်သူမျှမက 1 မြစ်ရေမှတဆင့်အယ်လ်ဘမ်
ပုံစံ: အသီးအသီးအခြားမှစပီကာကိုချိတ်ဆက်ရန်တဦးတည်းအာဏာကိုလိုင်းနှင့်တစ်ဦး cable ကိုလိုအပ်သည်. တစ်နည်းနည်းရှုပ်ထွေး - - ကမှအကောင်းဆုံးင်အများဆုံးဟာ့ဒ်ဝဲ '' အားထုတ်မှုထုတ်လုပ်တူဒီ app ဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့် sidestep နှင့်သင့် streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုပိုင်အကျွမ်းတဝင်တဦးတည်းကပ်. အဆိုပါ retro-style အမျိုးမျိုး Cube Multi-အခန်းပီ၏အကွာအဝေး၏အစိတ်အပိုင်းများမှာ, သငျသညျသငျ့အိမျဝန်းကျင်ကိုချဲ့ထွင်ချင်သင့်တယ်.
အသံ: အသေးစိတ်အများကြီးထုတ်ဖော်ပြသ, တစ်ဦးစန်ဒရားခစျြတျော, ဒါပေမဲ့ဘေ့အစားညစ်ပတ်ပေရေထက်ယဉ်ကျေးစွာမြည်နိုင်. ဥပမာအားဖြင့်, ဒါကြောင့်လှလှပပသင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှဂျိမ်းစ် Blake ကရဲ့ကန့်သတ်များ၏ဒေသန္တရနှင့်အသံမျိုးပွားနိုင်ပြီပေမယ်ဘေ့စတုန်ခါကအပ်နဲ့တူလြှောကျမပါဘူး. သို့သော်, ဖျော်ဖြေပွဲအထူးသဖြင့် evocative သံ: Bowie ရဲ့ ဒါဝိဒ်သည်တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဘမ်လွန်စွာလေထုဖြစ်ပါသည်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: ဂရိတ်ပုံစံနှင့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုပုံစံချစျေးနှုန်းတွေကိုစောင့်ရှောက်, ဒါပေမယ့်သူတို့က 20 ရာစုအတွက်လုပ်ဂီတနှင့်အတူအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်.
ဉာဏ်များသော: Dali Zensor စပီကာတွေနဲ့ Denon Ceol. ဓါတ်ပုံ: အ Observer ဘို့ကက်သရင်းအန်းနှင်းဆီ
Denon တေးဂီတ + Dali Zensor 1 စပီ
£ 299 / £ 199; 130ဒဗလျူ; AirPlay, Spotify
လျင်မြန်စွာစတင်: နှစ်ဦးကြိုးစားမှုကိုယူ. app ကို download, လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမ. ပတ်ပတ်လည် 10 မိနစ်.
ပုံစံ: ဒီ streaming များစွမ်းရည်များနှင့်အတူတစ် amp ဖြစ်ပါသည်. ဒီတော့ပီကြိုးနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသင်တို့သည်ရှေး CD ကိုကစားသမား features. သငျသညျအခြို့သောအဟောင်းများကို Hi-Fi စပီကာမှပင်ရေနံတူးစင်ထတတျနိုငျသ. အပြည့်အဝအမွေကိုနားထောငျပျော်မွေ့ AM / FM ရေဒီယိုနားထောင်ခြင်းသည်အဝေဟင် supply ကနေတဆင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်အသစ်ဖက်ရှင် turntable ထည့်သွင်း. သင့်အနေဖြင့် optical သွင်းအားစုကိုအသုံးပြုပြီးသင့် TV အတွက်ဝါယာကြိုးပင်နိုင်, ကကြိုးတွေ၏အတော်လေးရှုပ်ထွေးင်ပေမယ့်, အတန်ငယ်အမှတ်ပျောက်ဆုံးစေခြင်းငှါအရာ.
အသံ: အသေးစိတ်တန်ချိန်, : D '' အန်ဂျလိုရဲ့နောက်ခံစကားများသောထွက်ဆောင်ခဲ့ ဘရောင်းသကြား နှင့်ဂျိမ်းစ် Blake ကအတွက်ယခင်ကကြားဖူးလက်ညှိုး-ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကလစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆို. မစ်စီ Elliot ရဲ့ GET နေသောဥရမှမထင်မှတ်တွင် ပို. လှုပ်ရှားခံစားခဲ့ရနှင့်ဗန် Morrison ရဲ့ဘယ်တော့မှ Veedon မွေး ကြီးမားတဲ့တံပိုးမှုတ်သောအခါ.
ဆုံးဖြတ်ချက်: ၎င်း၏ CD ကိုကစားသမားများနှင့် Hi-Fi ခြားနားမျိုးစုံသွင်းအားစုနှင့်အတူ, ဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ဂီတ၏ဤလောကသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်မမှလိုလားသူကိုဂီတကိုနှစ်သက်ဘို့ကြီးစွာသော option ဖြစ်တယ်.
bassheads များအတွက်: အဘို့စ Soundtouch30 ဓါတ်ပုံ: အ Observer ဘို့ကက်သရင်းအန်းနှင်းဆီ
လျင်မြန်စွာစတင်: အဆိုပါဘို့စ် app ကိုသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်တောင်းဆို, မွမ်းမံ၏စာရေးနှင့် "စောင့်ဆိုင်းကျေးဇူးပြုပြီး" မက်ဆေ့ခ်ျပါဝငျ. နှစ်ဦးကြိုးစားမှုကိုယူ. ပတ်ပတ်လည် 20 မိနစ်.
ပုံစံ: ဒီအဖြူယူနစ်ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးကိုစက်ရုံများ၏စောင့်ဆိုင်းခန်းထဲမှာရာအရပျထဲကမကြည့်မယ်လို့ - သင်အနက်ရောင်ဗားရှင်းပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ,. ဘို့စ်ရဲ့ SoundTouch app ကိုမသုံးဘဲကြောင့်လုပ်ကိုင်ရန်စားမှုကြောင့်ဖွင့်, သာမန်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတစ်ခုမလိုအပ်ဘဲအလွှာရာဖြစ်ပါသည်. AirPlay သို့မဟုတ် Apple ကဂီတကိုထောကျပံ့မပါဘူး, ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲသည့်တိုင်အောင် Apple ကပိုင်ရှင်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်.
အသံ: pre-ကို Wi-Fi ကို, ဘို့စ်ဒါသေးငယ်တဲ့အရာတစ်ခုခုမှကြီးစွာသောအသံသည်ပို့ဘို့နာမည်တစ်ခုထူထောင်, ယခုမူကားစျေးကွက်အတွင်းယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူစည်ကားနေသည်, အသံဘို့စ်ရဲ့နားကိုတစ်ဦး retune လိုအပ်ပါတယ်. Music ကိုလျော့နည်းရှုပ်ထွေးတဲ့အသံ, ဘေ့စအသေးစိတ်များအတွက်အစားထိုးအဖြစ်ဖွင့်လှည့်နှင့်အတူ. ဒါကြောင့်စပျစ်ရည်ကိုတစ်ဖန်ဖြစ်လျှင်, ဒီ over-oaked chardonnay ဖြစ်လိမ့်မယ်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: အကောင်းဆုံးကိုဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ရူပမ, သင်မူကားတစ်ဦး basshead နေလျှင်သင်ကလစျြလြူရှုချင်စေခြင်းငှါ,.
အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်: အ Sonos Play စ: 5. ဓါတ်ပုံ: အ Observer ဘို့ကက်သရင်းအန်းနှင်းဆီ
Sonos Play စ:5
£ 429; Apple ကဂီတ, Spotify, Deezer, ဒီရေ
လျင်မြန်စွာစတင်: အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့. သုံးမိနစ်.
ပုံစံ: သငျသညျက၎င်း၏ app ကို အသုံးပြု. မရှိဘဲသင်၏ Sonos လုပ်ကိုင်ရန်မနိုင်, ဒါပေမယ့် App ဖြစ်ပါတယ်, သင်ကမှတင်သွင်းတခါ, အဖြစ်ကောင်းစွာ Apple နှင့် Spotify မှသူတို့အားအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ. ဒါဟာတည်ငြိမ်တဲ့င်, drop-တနေရာအလွန်ရှားပါးသောဖြစ်ကြပြီးအကြား switching နှင့်သင်၏အိမ်ကပတ်ပတ်လည်ကနေအတူတူစပီ tag ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ doddle ဖြစ်ပါသည်. သင်အခြားအခန်းသို့ရွေ့လျှင် volume အတက် cranking သင်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတော်လေးဈေးပေါပေါနောက်ထပ်ယူနစ်ဝယ်နိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအခြားအဓိကပေါင်းသည်.
အသံ: Drake ရဲ့အကြိုက်အဘို့အ Optimised. ကြွယ်ဝသော, တစ်ခါတစ်ရံဒီမှာအခြားယူနစ်အချို့ကိုအသံသွင်းထံမှထွက်ဆွဲသောအသေးစိတ်နှင့်ရငျးနှီးထုတ် buffs bassy ပွတ်သံကို. တခြားသူတွေအချို့ကိုသူတို့ရဲ့အစွမ်းအချွတ်ပြသဖို့ပို volume အလိုအပျသော်လည်းဒါဟာအနိမ့် volumes ကိုမှာအစွမ်းထက်အသံ.
ဆုံးဖြတ်ချက်: အသုံးပြုမှုထက်သာလွန်လွယ်ကူခြင်း, streaming များဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားယူနစ်တစ်ဦးရွေးချယ်မှုအလွန်ကြီးမားသောအကွာအဝေးစျေးကွက်ခေါင်းဆောင် Sonos လုပ်, audiophiles မဟုတ်အတော်လေးစံမှတက်သံကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်.
ပြတ်သားနှင့် dynamic: ကိန်းဘရစ်ချ်အသံရဲ့ Minx စနစ်က. ဓါတ်ပုံ: အ Observer ဘို့ကက်သရင်းအန်းနှင်းဆီ
ကိန်းဘရစ်ချ် Minx ရှီ + Minx XL စပီကာ
£ 399; £ 199; 80ဒဗလျူ; Spotify, 10 အသံပုံစံများ
လျင်မြန်စွာစတင်: သုံးမိနစ်, ညွှန်ကြားချက်မသုံးဘဲ.
ပုံစံ: ထိုစနစ်၏ထိန်းချုပ်ရေးတစ်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကင်းဘရစ်၏ရက်စွဲ-ရှာဖွေနေ Stream ကို Magic app ကိုပေါင်း Spotify app ကိုလိုအပ်ပါတယ် (သင်တို့ကိုသုံးနေတယ်န်ဆောင်မှုရဲ့လျှင်).
Related: ကြိုးမဲ့ NC နားကြပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်အပေါ် Sony က h.ear: တကယ်ကြီးမြတ်၏ဖွင့်ရှက်တတ်
ဤသည်အခြားယူနစ်အဖြစ်အဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး, စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူသက်သက်သာထိန်းချုပ်နိုင်သည့်. မရှိ AirPlay ဆက်သွယ်မှုင်နှင့် Apple ဂီတထောက်ခံသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့် Mac ကသိုများအတွက်စံပြမဟုတ်ပါဘူး. ဒီ Set-up ကယ့်ကွန်ယက်သိုလှောင်မှုကိုကိရိယာကတက်ချိတ်လိုသူအသုံးပြုသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည် (NAS) သူတို့ရဲ့ဂီတစုဆောင်း၏ high-resolution ဖိုင်တွေ်.
အသံ: အားလုံးအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးပြတ်သားနှင့် dynamic. ကျနော်တို့ကိုသင် Rock တော်မူမည်ဘုရင်မ၏ Boot တက် stomping နှင့်သြဘာသံအစား clompy ထက်လုံ့လရှိသူအသံ. ကိုယျ့ကိုမှ Selena Gomez ရဲ့လက်စွဲကသင့်ကဲ့သို့စပီကာထဲကပေါ်လာ.
ဆုံးဖြတ်ချက်: over-အထူးအသားပေးသင်ရုံသင့်ဖုန်းမှဂီတစီးဆင်းရန်ရှာနေမယ်ဆိုရင်, သငျသညျရေနံတူးစင်ကိုတက်တဲ့ NAS နှင့်ပင်တစ် turntable ဖို့ရှာနေလျှင်ဒါပေမဲ့ဒီထူးချွန်ပါလိမ့်မယ်.
အ Sonos Play စ၏အတိမ်အနက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခုနှစ်တွင်:5
Google က Chromecast အသံပြန်လည်သုံးသပ်: £ 30 အွန်လိုင်းသင်၏စပီယူ
သိပ္ပံပညာရှင်များမှာမွန်းချိန်းတွေ့ကြ 4.470 ဘီလီယံကိုအနှစ်
Samsung ကအသစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Smart Watch ကဂီယာလွှတ်တင် 2
iPhone ကို Apple ကအဖြစ်အပျက်စက်တင်ဘာလမှာသရုပ်ဆောင်ဖို့မျှော်လင့်ထား 1...
38612	10 အပိုဒ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်တေးဂီတနှင့်အသံ, ရှာဖှေတှေ့, အင်္ဂါရပ်များ, လေ့လာသူက New ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာ, The New ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အဆိုပါ Observer, ကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီး, ဝိုင်ဖိုင်
← သိပ္ပံပညာရှင်များသည်တစ်ဦးက "ဦးနှောက်၏ Atlas" Created ဖူး လောင်းကစားသချာင်္ Changed ခုနစ် Lucky နည်းလမ်းများ →
အဆိုပါ 20 best gadgets of 2018
ဒီဇင်ဘာ 10, 2018
ဘယ် Apple က MacBook လက်တော့ငါမဝယ်သင့်တယ်?
နိုဝင်ဘာ 18, 2018
နိုဝင်ဘာ 4, 2018
iPhone ကို XR ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အောက်တိုဘာ 31, 2018
ဟွာဝေး Mate 20 Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အောက်တိုဘာ 29, 2018